Kutheni intombazana ingaphupha? Ukutolika kwiincwadi ezininzi eziphuphayo malunga namantombazana athabathekileyo nebuhlungu.
Kutheni intombazana iphupha? Ukutolika kwamaphupha.
Abantwana bavame ukubonakala ephupheni. Ngokuqhelekileyo kuqhelekileyo kubazali abancinci, abo balele ebuthongweni babo banenkxalabo ngomntwana wabo. Kodwa oku akusoloko kubonakalisa amava onke. Kungenzeka ukuba intombazana kunye nentombazana ephupheni ingaba yi-omen yeziganeko ezibalulekileyo.
Qiniseka ukuba ukhumbule iinkcukacha zeli phupha, ngakumbi xa uphupha intombazana encinane.
Khumbula ngubani ephupheni lakho owayembambe eengalo zakhe. Oku kubaluleke ngakumbi kwiibinibini. Ukuba ibanjwa ngumfazi, ngoko uya kuba nentombi, kwaye ukuba umntu uyindodana.
Ukuba uphupha ukuba ubambe umntwana womnye umntu ezandleni zakho, abo bajikelezile bakwenza uzive ungenalo, kwaye ulungile.
Kuba umfazi otshatileyo uphupha, ngoko, umnqweno onqwenela ukuba nentombi. Kodwa ngaphandle kwalokhu, kubalulekile ukunyanga ipropati yakho ngokucophelela, kuba ngeli thuba amathuba okulahleka kwezinto ezibonakalayo akhula. Kodwa ngokwemigqaliselo jikelele, iphupha lentombazana encinci lingahambelani kwaye lingaziboni naluphi na uxinzelelo okanye ubunzima obukhethekileyo.
Namela ingqalelo yayo. Ukuba ubonakala egule, akhala okanye akathanga kakuhle, ngoko kwixesha elizayo kuya kubakho ukuphazamiseka kwishishini kunye nezinguqu ezingathandekiyo. Mhle kwaye ujabule - ekuphatheni izinto eziphathekayo kunye nenhlalakahle yentsapho.
Bhatala ngokukhethekileyo ukulala, apho kwenzeka ingozi kwintombazana encinane. Lo mbono unxulumene ngokuthe ngqo kwinyani. Kufuneka uqaphele ukuba ungangeni kwindawo eyingozi ebandakanya abantwana.
Ezinye ukutolika kwamaphupha malunga namantombazana amancinci
ukuzala - uthembisa iziganeko ezimangalisayo ebomini. Kodwa kulungele ukubeka ingqalelo indlela ukuzalwa kwenzeka ngayo. Ukuba kunzima, ngoko kufuneka wenze umgudu wokufezekisa oko ufuna. Ukuzalwa okulula - ukufezekisa okulula komgomo ofunwayo.
Ukutolika okwesibini kwiphupha elinjalo kuthetha ukuba kufuneka uthathe ngokukhawuleza ukuphunyezwa kweprojekthi, oye walungiselela ixesha elide. Kubalulekile ukuba ngoku uya kunandipha inkxaso yomntu onentshisekelo oye waba nomdla kwizicwangciso zakho, kwaye oogxa bakho balinde nje iingcamango ezintsha.
ukuba indoda yabona ukuzalwa kwamantombazana amawele, kuba nguye uphawu olungathandekiyo. Uziva uchithekile ngaphakathi. Zama ukuthatha iholide uze uphumule ngokuthula. Ngaphandle koko, usengozini yokuba ngumlutha wotywala.
ukhumbule ngokugqithisekileyo iphupha apho ubona intombazana enhle. Kwaye awuboni nje, kodwa ugqoke kwiingubo ezihlakaniphile uze wenze iinwele zakho. Uninzi lwabaguquli bavuma ukuba iphupha elinjalo liprofeto kwaye ngokukhawuleza uza kuba ngumama okanye uyise wendodakazi enhle.
Ukuzibona kwinqanaba lakhe kuthetha ukuba kunzima ukuba uhlangabezane neengcambu zonke zeengxaki kwaye uzive uncedo. Enyanisweni, esi simo sengqondo asikho izizathu ezifanelekileyo. Ufuna nje ukuyeka unamahloni kwaye uqaphele amandla akho. Nangona kukho abantu abaninzi abanamandla nabanamandla abakungeze, musa ukuphelelwa lithemba. Iimpawu zakho ezintle ziza kukunceda ukuba uthathe isikhundla esifanelekileyo kuluntu. Nalolu phupha lubonisa ukuba ukhathele ngokuziphatha. Ufuna ukuba ubuncinci uthathe umhlalaphantsi kwaye uzibeke kwaye ubeke iingcamango zakho ngendlela.
Ukubona intombazana encinci intombazana yakho, nangona ungenabantwana okwamanje, okanye sele sele sele ikhulile, ixhomekeke kwiintlobo ezahlukeneyo zokuphuhliswa kweziganeko. Into ephambili ekufuneka iqwalaselwe yinto yokubonakala komntwana. Ukuba uyakhala, ke ukuphoxeka kukulindele. Kodwa ukuba uyavuya, ngoko uya kufumana ukugqithiswa okukhulu kwaye uza kuphathwa kakuhle ngabanye.
Kutheni iphupha lokubanga. Zonke iinguqulelo
Yintoni ifowuni iphupha ngayo? Ukutolika kweencwadi ezithandwayo zokuphupha
Ziziphi amaphupha ezenziwa ukuze zizuze?
Kutheni ndilahlekelwa ngamazinyo?
Tartlet kunye ne-custard
Amaqanda aqhekeza ngesonka
Inkomfa. Amanqanaba ayo kunye nencazelo yokuqala